Zinedine Zidane Oo Sheegay In Uu Ka Daalay Eedaynta Loo Soo Jeedinayo Muxuuse Ka Yidhi In Isku Aadkii Copa Del Rey Ay Ku Beegmeen Leganes? - Laacib.net
Zinedine Zidane Oo Sheegay In Uu Ka Daalay Eedaynta Loo Soo Jeedinayo Muxuuse Ka Yidhi In Isku Aadkii Copa Del Rey Ay Ku Beegmeen Leganes?
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane oo waraysi dhinacyo badan ah bixiyay ayaa qirtay in uu ka daalay eedaynta joogtada ah ee xili ciyaareedkan loo soo jeedinayo wuxuuna xusay in ayna xaalada kooxdiisa Madrid u xumayn sida loo sheegayo.
Zidane ayaa sidoo kale wax laga waydiiyay in isku aadkii siddeed dhamaadka Copa Del Rey ay kooxdiisu ku dhacday Leganes halka sidoo kale la waydiiyay haddii uu filayo in jamaahiirta Madrid ay cadho kala dul dhici doonaan isaga iyo ciyaartoyda kooxdiisa ee kulanka La Liga ee ay Villarreal la ciyaari doonaan.
Ugu horayn Zidane oo ka jawaabaya in Leganes ay la ciyaari doonaan siddeed dhamaadka tartanka Copa Del Rey ayaa yidhi: “Waa kulan adag oo siddeed dhamaadka ah. Waxa fiicani waa in aanaan Madrid ka bixi doonin. Ka hor inta anaan afar dhamaadka eegin waxaa wajib ah in aanu eegno siddeed dhamaadka. Anagu waxaanu nahay Madrid isla markaana waxaanu ognahay sida ay u adag yihiin kooxaha naga soo horjeedaa. Anagu waxaanu nahay Madrid”.
Intaa kadib ayaa Zidane la waydiiyay, Miyaad ka daashay eedaynta kooxdaada loo soo jeedinayo? Wuxuuna macalinka ree France ku jawaabay: “Haa, anigu kan waan ka daalay, laakiin waxba ma badalayso isla markaana ma doonayo in aan badalo. Waa wax aad u salhan halkaad joogto in aad wax walba ku sheegto in ay xun yihiin, waanad ogtaay in ayna wax walba xumayn, waa wax fiican in si liidata looga hadlo Real Madrid, wax badan ayay iibinaysaa”.
Hadalkan ayuu Zidane ku durayay saxaafada oo uu sheegay in marka ay si xun uga hadlaan Real Madrid in badan laga iibsanayo jaraa’idkooda wuxuuna ku dooday in saxaafadu ay wax xun ka sheegi karto kooxdiisa oo ay u sahlan tahay taasi.
Zidane ayaa la waydiiyay haddii uu ka walwalsan yahay in jamaahiirta Bernabeu ay falcelin cadho leh samayn doonaan wuxuuna yidhi: ” Waxaan dadka u sheegi karaa in ayna dhegaysan wax walba oo ay suurogal tahay in la sheegay, sabbatoo ah wax walba ma xuma. Waxaanu u baahanahay jamaahiirta, si la mid ah markii aanu sida fiican u soconay, ma jiro baahi dareenkan oo kale ahi marka ayna wax si fiican u socon, dadka dhinacayaga ayaanu uga baahanahay’.
Real Madrid oo labadii kulan ee ugu danbeeyay barbaro la soo kala gashay kooxaha Celta Vigo iyo Numancia ee tartamada La Liga iyo Copa Del Rey ayaa kulan muhiim ah la yeelan doonta kooxda Villarreal waana kulan ay Zidane iyo kooxdiisu u baahan yihiin in ay xaalada iska fudaydan karaan haddii ay guul gaadhaan halka haddii kale ay dhibaato wayn oo kale sii dhex gali karaan.